ထိုင်းကပရိတ်သက်တွေကို လွမ်းတယ်လို့ ထုတ်ပြောလာတဲ့ မင်းသားချောလေး ပိုင်တံခွန် – MC Tv Club
ထိုင်းကပရိတ်သက်တွေကို လွမ်းတယ်လို့ ထုတ်ပြောလာတဲ့ မင်းသားချောလေး ပိုင်တံခွန်
ပိုင်တံခွန်ကတော့ ပရိသတ်တွေရဲ့ အားပေးချစ်ခင်မှုကို အပြည့်အဝရရှိပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့ပရိသတ်အချစ်တော် သရုပ်ဆောင်မော်ဒယ်လ်မင်းသားချောတစ်လက်ပဲဖြစ်ပြီး ပြည်တွင်းရောပြည်ပကမိန်းမလှလေးတွေဝိုင်း ဝိုင်းလည်နေတဲ့အထိ သည်းသည်းလှုပ်အားပေးခြင်းခံနေရတာဖြစ်ပါတယ်။
ပိုင်တံခွန်ကတော့ မိန်းကလေးတိုင်း အားကိုးချင်စရာကောင်းလောက်တဲ့ ဗလတောင့်တောင့်နဲ့Body အ ချိုးအစားကို ပိုင်ဆိုင်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။‌ကျစ်လျစ်တဲ့ ကြွက်သားတွေကတော့ ပိုင်တံခွန်ရဲ့ဆွဲဆောင်မှုအရှိဆုံးအချက်တွေပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
ပိုင်တံခွန်ကခုဆိုရင်ပရိသတ်တွေ အရှေ့ကိုအနုပညာအလုပ်တွေအနည်းငယ်ပြုလုပ်ရင်း ပြန်လည်ရောက်ရှိလာပါတယ် ။ဒီနေ့မှာတော့ ပိုင်တံခွန်က ထိုင်နိုင်ငံ၎င်းမှ ပရိသတ်များကိုလွမ်းမိကြောင်းပြောလာပါတယ်။
ပိုင်တံခွန်က “ထိုင်းနိုင်ငံမှ သူရဲ့ ပရိသတ်များကိုလည်း သတိရကြောင်း၊ ထိုင်းနိုင်ငံမှပရိသတ်များကိုလည်း မြန်မာပရိသတ်များနည်းတူချစ်ကြောင်း နှင့် အကယ်၍ အခွင့်ရေး ရခဲ့ရင်ထိုင်နိုင်ငံက ပရိသတ်များကိုတွေ့ချင်ကြောင်း” ကိုတော့ သူ့ရဲ့ ဖေ့စ်ဘွတ်မှတဆင့်
” I always miss each and every fan from Thailand.
If I haveachance, I would like to meet all of you like last time.I won’t say much anymore. It would be nice to know that I love everyone in Thailand as much as the fans in Myanmar.My love never changed! ဆိုပြီးပြောလာတာဖြစ်ပါတယ်ထိုင်းမှာရှိတဲ့ ပိုင်တံခွန်ရဲ့ ပရိသတ်တွေရှိရင် ပိုင်ပိုင် ကိုသတိရသေးလားဆိုတာပြောခဲ့ပေးပါနော်
ထိုင္းကပရိတ္သက္ေတြကို လြမ္းတယ္လို႔ ထုတ္ေျပာလာတဲ့ မင္းသားေခ်ာေလး ပိုင္တံခြန္
ပိုင္တံခြန္ကေတာ့ ပရိသတ္ေတြရဲ႕ အားေပးခ်စ္ခင္မႈကို အျပည့္အဝရရွိပိုင္ဆိုင္ထားတဲ့ပရိသတ္အခ်စ္ေတာ္ သ႐ုပ္ေဆာင္ေမာ္ဒယ္လ္မင္းသားေခ်ာတစ္လက္ပဲျဖစ္ၿပီး ျပည္တြင္းေရာျပည္ပကမိန္းမလွေလးေတြဝိုင္း ဝိုင္းလည္ေနတဲ့အထိ သည္းသည္းလႈပ္အားေပးျခင္းခံေနရတာျဖစ္ပါတယ္။
ပိုင္တံခြန္ကေတာ့ မိန္းကေလးတိုင္း အားကိုးခ်င္စရာေကာင္းေလာက္တဲ့ ဗလေတာင့္ေတာင့္နဲ႕Body အ ခ်ိဳးအစားကို ပိုင္ဆိုင္ထားတာျဖစ္ပါတယ္။‌က်စ္လ်စ္တဲ့ ႂကြက္သားေတြကေတာ့ ပိုင္တံခြန္ရဲ႕ဆြဲေဆာင္မႈအရွိဆုံးအခ်က္ေတြပဲ ျဖစ္ပါတယ္။
ပိုင္တံခြန္ကခုဆိုရင္ပရိသတ္ေတြ အေရွ႕ကိုအႏုပညာအလုပ္ေတြအနည္းငယ္ျပဳလုပ္ရင္း ျပန္လည္ေရာက္ရွိလာပါတယ္ ။ဒီေန႕မွာေတာ့ ပိုင္တံခြန္က ထိုင္နိုင္ငံ၎မွ ပရိသတ္မ်ားကိုလြမ္းမိေၾကာင္းေျပာလာပါတယ္။
ပိုင္တံခြန္က “ထိုင္းနိုင္ငံမွ သူရဲ႕ ပရိသတ္မ်ားကိုလည္း သတိရေၾကာင္း၊ ထိုင္းနိုင္ငံမွပရိသတ္မ်ားကိုလည္း ျမန္မာပရိသတ္မ်ားနည္းတူခ်စ္ေၾကာင္း ႏွင့္ အကယ္၍ အခြင့္ေရး ရခဲ့ရင္ထိုင္နိုင္ငံက ပရိသတ္မ်ားကိုေတြ႕ခ်င္ေၾကာင္း” ကိုေတာ့ သူ႕ရဲ႕ ေဖ့စ္ဘြတ္မွတဆင့္
If I haveachance, I would like to meet all of you like last time.I won’t say much anymore. It would be nice to know that I love everyone in Thailand as much as the fans in Myanmar.My love never changed! ဆိုၿပီးေျပာလာတာျဖစ္ပါတယ္ထိုင္းမွာရွိတဲ့ ပိုင္တံခြန္ရဲ႕ ပရိသတ္ေတြရွိရင္ ပိုင္ပိုင္ ကိုသတိရေသးလားဆိုတာေျပာခဲ့ေပးပါေနာ္
Previous Article ၇ ရက်သားသမီးများအတွက် ရည်စူးလို့ လှုဒါန်းလိုက်တဲ့ ဝိုင်းစုတို့ မိသားစုရဲ့ ကြီးမြတ်တဲ့အလှု
Next Article အဖေအမေနဲ့အစ်ကိုဖြစ်သူအပေါ်ထားတဲ့ ဗီဗာဟိန်းရဲ့သံယောဇဉ်ကို ပြောပြလာတဲ့ ခင်ပွန်း